Global Voices teny Malagasy » Vakio Ato Ny Fitantaràna Voalohany – Tsy Nifindra Tànana – Momba Ny Daroka Baomba Tao Hiroshima Sy Nagasaki · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2015 15:35 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Ady & Fifandirana, Fanabeazana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tantara
Ny raki-pahatsiarovana “Hiroshima Peace Memorial” ao Hiroshima, Japana, toerana nisy ny Efitrano malalaky ny “Hiroshima National Peace Memorial” ary ny fitantaràna voalohany vao haingana. Sary natolotry ny Wikicommons  / Aiden mpampiasa Wikipedia.
Ireo mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolom-pirenena ao Yokohama, Japana  no nandika ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny teny Japoney nataon'ireo sisampaty tamin'ny daroka baomba atomika ho teny Anglisy.
Manamarika ny faha-75 taonan'ny daroka baomba atomika tao Hiroshima sy Nagasaki ny Aogositra 2015, daroka baomba izay nahafatesana olona an'hetsiny maro. Andro maromaro taorian'ny nandefasan'i Etazonia ireo baomba, nilavo lefona i Japana, nanamarika ny fiafaràn'ny Ady Lehibe faharoa.
Ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo sisampaty tamin'ilay daroka baomba atomika dia noraketina anaty lahatsary miaraka amin'ny dikanteny Anglisy natao misosa ery ambany.
Ny Tambajotran'ireo Mpandikateny ho Fanapariahana Ho an'izao Tontolo Izao ny Fijoroana Vavolombelon'ireo Sisampaty Tamin'ny daroka Baomba Atomika -Network of Translators for the Globalization of the Testimonies of Atomic Bomb Survivors  (NET-GAS) no nanatanteraka ny asa. Adikan'io fikambanana io ho amin'ny teny Anglisy ao anaty lahatsary izay tahirizina ao amin'ny “Hiroshima National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victims” ho amin'ny teny maro samihafa. Azon'ny rehetra jerena ao amin'ny mozean'i Hiroshima, Japana ireo lahatsary ireo.
Azo jerena eto ny sasany amin'ireo lahatsary.
Asongadin'ilay tranonkala ihany koa ireo rakipeo vita dika  avy amin'ireny fitantarana voalohany ireny ary ireo tsiahy voadika  tamin'ny daroka baomba nanjo an'i Hiroshima sy Nagasaki.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/24/67852/
 Sary natolotry ny Wikicommons: http://en.wikipedia.org/wiki/File:GenbakuDome02.jpg
 Anjerimanontolom-pirenena ao Yokohama, Japana: http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150223p2a00m0na014000c.html
 Tambajotran'ireo Mpandikateny ho Fanapariahana Ho an'izao Tontolo Izao ny Fijoroana Vavolombelon'ireo Sisampaty Tamin'ny daroka Baomba Atomika -Network of Translators for the Globalization of the Testimonies of Atomic Bomb Survivors: http://www.kufs.ac.jp/blog/department/net-gtas/
 eto : http://www.global-peace.go.jp/en/picture/index.html
 rakipeo vita dika: http://www.global-peace.go.jp/en/sound/index.html
 ireo tsiahy voadika: http://www.global-peace.go.jp/en/taikenki/index.html